Nahazo kilalao sy fitaovam-pianarana : nankalaza ny Noely ny ankizin’ny Akany Fazako | NewsMada
Nahazo kilalao sy fitaovam-pianarana : nankalaza ny Noely ny ankizin’ny Akany Fazako
Afaka hifaly sahala amin’ny ankizy rehetra ireo beazina ao amin’ny Akany Fazako. Notolorana kilalao, sakafo, fitaovam-pianarana izy ireo.
Toy ny fanao isan-taona, rehefa ankatoky ny fetin’ny Krismasy, nizarana kilalao ireo ankizy kamboty na avy amin’ny fianakaviana sahirana raisina an-tanana ao amin’ny Akany Fazako eny Ambohijanahary Antehiroka. Ny mpanorina ny akany miaraka amin’ny Association les amis de Fazako à Paris no nanao izany, ny faran’ny herinandro lasa teo. 53 taona no nikarakara izany akany izany Andriantsitohaina Charles sy Ginette, araka ny nambarany. Ankoatra ny kilalao, misy fitaovam-pianarana, sakafo avy amin’ny orinasa sy olona malala-tanana maro mpanohana ny akany.
Tonga teny an-toerana mihitsy ny filohan’ny Association les amis de Fazako à Paris sy ny mpiara-miasa aminy, i Dominique sy François Bretonnet nizara ny kilalao nentin’izy ireo avy any Frantsa. Nanomboka nanampy ny Akany Fazako ny taona1998 ny Association. Nanangan-jazalahy malagasy izy mivady 33 taona lasa izay ka teo no nahalala an’i Madagasikara voalohany. Isam-bolana mandefa vola hatramin’ny 8 tapitrisa Ar ny Association avy any Frantsa ahafahana manome ny karaman’ny mpiasa, hividianana ny sakafon’ny ankizy ary ny saram-pianarana isam-bolana. « Malagasy ny iray ampahatelon’ny mpikambana ary Frantsay kosa ny ambiny », hoy ny fanazavan’ny filohany, Dominique Bretonnet. Miezaka manentana olona maro izy ireo hanohana ny Akany Fazako ka nanokatra tranonkala manokana fampahafantarana ny Association sy ny akany malagasy manokana.
30 ny ankizy raisina an-tanana ao amin’ny akany amin’izao fotoana izao, 10 amin’izy ireo efa mahaleo tena tanteraka ka niverina any amin’ny fianakaviany. Enina efa miasa rahateo, hoy ny mpiandraikitra ny akany, Rasoarimalala Michèle Claire. Nisy zazalahy kely 4 taona vao noraisina tao amin’ny akany ny herinandro lasa teo, satria efa kamboty ray ary sahirana ny reniny. Nandritra ny fety ny asabotsy teo, nanao fampisehoana koa ny ankizy rehetra nanamarihana ny fetin’ny Noely.